Modely maimaim-poana sy tsy maintsy ananana ho an'ny Adobe Indesign | Famoronana an-tserasera
Ny ankamaroan'ny mpamorona sary dia ho voatondro amin'ny famolavolana karazana tetikasa: na editorial, web na multimedia. Izany no antony maha-zava-dehibe ny ianarantsika mamantatra ireo loharano izay afaka manome antsika ny valiny tsara indrindra ary maninona no tsy misy aingam-panahy fanampiny, izay indraindray mora ampiasaina. Ireo Giants Adobe dia manolotra antsika ny fahafaha-mamolavola lamina isan-karazany amin'ny alàlan'ny fampiharana toa Adobe Indesign o Adobe Dreamweaver, ity farany natoro indrindra amin'ny fiasana amin'ny tetikasa misy ny fivoahan'ny varavarankely an-tranonkala. Saingy, anio dia hifantoka amin'ilay modely voalohany ho an'ny Adobe Indesign izahay, ary izany dia satria misongadina noho ny famoronana ity rindrambaiko ity hamaly tsara ny karazana tetikasa sary rehetra izay mamoaka ny fanontana. Avy amin'ny afisy, katalaogy, bokikely, magazine, boky ary koa ho an'ny tetikasan'ny tranonkala toy ny sora-baventy, pejy web na gazety.
Araka ny efa hitanao, dia misy matihanina maro manapa-kevitra ny hizara ny asan'izy ireo amin'ny vondrom-piarahamonina ary matetika ny modely izay azo ovaina tanteraka amin'ny karazana tanjona sy tetikasa. Ampirisihina mafy isika mba hanana banky loharanon-karena tsara eto an-toerana hahazoana loharano manampy antsika hampivelatra ny tetikasantsika. Betsaka amin'izy ireo, ary anio dia hanao iray isika fifantina tena mahaliana miaraka amin'ireo modely ho an'ny adobe indesign, avo lenta sy mora ampiasaina ary azo ovaina avokoa.
1 Karazan-tolo-kevitra inona avy no azonay omena anao alohan'ny andehananao miasa?
2 Fisafidianana modely ho an'ny Adobe Indesign izay tsy azonao adino
Karazan-tolo-kevitra inona avy no azonay omena anao alohan'ny andehananao miasa?
Manararaotra ity fotoana ity aho hanoro anao ny hiezahanao hamolavola ny volavolanao manokana ary io karazana loharanom-pahalalana io dia manandrana mampiasa azy ireo hatrany ho loharanon'ny aingam-panahy ary manandrana miantoka fa ny vokatra farany dia avy aminao. Ataovy ao an-tsaina fa ny fisehosehoana dia manondro ny asa firafitry ny tetikasa sary rehetra ary ny zavatra hataontsika amin'ny alalany dia ny famoronana ara-bakiteny ireo taolana izay haharitra ny lahatenintsika iray manontolo, na inona na inona karazana. Amin'ny teny ankapobeny, asaina atao ity karazana asa ity mba hamoronana vahaolana madio ary ambonin'izany rehetra izany, vahaolana azo vakiana izay mamela famakiana mora ary amin'ny fomba toy izany no ahafahan'ny mpamaky mandehandeha mamaky tsara ny atiny.
Avereno jerena ireo fizarana izay ny tetik'asa resahina dia namboarina sy ny faritra tsirairay hizarantsika ny tetikasanay ary koa ny asa izay hotanterahin'izy ireo tsirairay. Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny hametrahanao fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifanao ary hijerena akaiky ireo filan'ny mpanelanelana izay hanaovanao ny volanao.
Manoro hevitra antsika tokoa ny hiezahantsika hiara-miasa a fomba fijery manerantany ary amin'izany fomba izany dia ampifandraisina tanteraka amin'ireo volavolan-tsary sisa tavela izay hamolavola ilay tetik'asa hiasantsika. Raha, ohatra, isika hamolavola flyers ho an'ny orinasa iray dia tsy maintsy manandrana miantoka isika fa mifanaraka tsara sy mifanaraka amin'ny endrika asehon'ity orinasa ity amin'ny tranokalany, ny sary famantarana, ny loko orinasa ampiasainy ... Ny tolo-kevitra tsara dia tokony ho fantatra 100% amin'ny orinasa na tetikasa asehony amin'ny fahitana.
Angamba amin'ny asa voalohany ilainao orientation sasany, satria miankina amin'ny tetikasa iasantsika, mety ho lasa be pitsiny kokoa ny asantsika. Ny môdely dia mety ho io orientation io, indrindra amin'ny lafiny fitoviana, refy ary firafitra. Raha tena te hanokan-tena amin'ny famolavolana sary amin'ny sehatra matihanina ianao, andramo ny mamorona ny sangananao (izany no atao hoe mpamorona sary) ary miezaha hampiasa ny modely rehetra hitanao ho toy ny orientation na ohatra amin'izay azonao atao fotsiny .
Amin'ny internet dia misy vahaolana marobe isan-karazany, ny sasany amin'izy ireo dia ho maimaim-poana ary ny hafa kosa premium. Amin'ny ankapobeny ity farany dia mazàna manome valiny matihanina bebe kokoa, na dia tsy mila izany aza. Raha ny marina, amin'ny safidinao anio dia ho hitanao fa misy fomba maro hafa azo isafidianana azontsika atao amin'ny fomba mora sy mora ampiharina.
Fisafidianana modely ho an'ny Adobe Indesign izay tsy azonao adino
Misy pejy web iray izay tena atolotra ho an'izay rehetra handeha hiasa amin'ny endriny ary natokana ho an'ny tahiry ho an'ny Adobe Indesign. Ny sasany aminareo dia mety efa mahalala an'io. Ity pejy ity dia Stock Indesign ary mamporisika anao hanoratra izany aho satria azo antoka fa mila assiduous bebe kokoa noho ny eritreretinao ianao. Ao anatin'izany no ahitanao ireo loharano ho an'ny firafitry ny resume, boky, magazine na bokikely.
Diptych orinasa minimalista sy kanto
Vahaolana marobe momba ny flyer amin'ny orinasa
Fametrahana orinasa madio sy minimalista
Ny doka amin'ny toerana midadasika
Brochure orinasa madio sy minimalista
Template an'ny sidina minimalista
Modely amin'ny gazety ambanivohitra
Magazine modely miaraka amin'ny loko isan-karazany ho an'ny tetikasa lamaody
Modely amin'ny magazine ankapobeny
Tolo-kevitra miloko ho an'ny magazine famoronana
Modely azo ovaina ho an'ny tatitra momba ny haino aman-jery sosialy amin'ny fomba fisaka
Famerenana kanto sy tsotra
Resume fisaka avy amin'ny infographic
Resaka fisaka minimalista
Modely fanarenana madio sy kanto
Modely dimy hanohizana pack
Kalonice: Modely kanto sy malina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Tokony ho fantatra: Modely Adobe Indesign ho an'ny matihanina maimaim-poana
Angel GaSo dia hoy izy:
Tiako ireo tolo-kevitra… tsara! Ho antsika tia minimalism
Valio amin'i Ángel GaSo